Zimbabweans in SA call on government to intervene in crisis - DFA
Home International Zimbabweans in SA call on government to intervene in crisis
Zimbabwe Solidarity Movement’s Tsungai Jani said corruption and hunger for power have destroyed the country
ZIMBABWEANS living in South Africa who fled for greener pastures have called for their homeland’s democracy to be saved.
Zimbabwe Solidarity Movement’s Tsungai Jani said corruption and hunger for power destroyed the country.
“Ultimately, the Zimbabwean health minister stepped down. But in Zimbabwe, you have freedom as long as you are saying what government wants you to say. He was then arrested for allegedly inciting violence.”
Previous articleDefending champ, aged 11, dies during beer drinking contest in Malawi
Next articleRamaphosa to meet with Nedlac, President’s Council as SA awaits Level 1 announcement